ပိုးအိအိခန့် ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ကျိန် စာ တိုက်ထား သလို ဆက်တိုက် ကြုံတွေ့နေရ တယ် ဆို တဲ့ အဖြစ် အပျက် များ – Real Link
ပိုးအိအိခန့် ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ကျိန် စာ တိုက်ထား သလို ဆက်တိုက် ကြုံတွေ့နေရ တယ် ဆို တဲ့ အဖြစ် အပျက် များ
By R MPosted on November 22, 2020 November 22, 2020
ပရိသတ် ကြီးရေ ….. အများအားကျ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစု များ ထဲမှာ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် နဲ့ နိုင်ငံကျော် ဘောလုံးသမားအောင်သူ တို့ မိသားစု လေးက လည်း အပါ အဝင် ပဲဖြစ် ပါ တယ် ။ သူတို့ နှစ်ဦး ဟာ ယခုဆို ရင် ပါး‌ဖောင်းဖောင်းလေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သားငယ်လေး သဲကိုး ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သဲကိုးလေးဟာလည်း အခုဆိုရင် တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး အရမ်းကိုချစ်စရာေ ကာင်းလာတာပါနော် ပိုးအိဟာ မကြာသေးမီကသူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ မင်းသမီးစလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ယခုလက်ရှိ အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့အထိ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အရာလေးတွေကို တင်ပေးလာပါတယ်။
အာ့တာ ကတော့… တွေးမိပြီး ကိုယ့်ဘာကိုယ် ရယ်မိလို့ဟာသအနေနဲ့ ပြောပြရဦးမယ် ကျွန်မဘဝကို ကံကြမ္မာကြီးက ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ အေးအေး လူလူထိုင်နေပါ လို့များ သတ်မှတ်ထားလေသလားမှတ်ရတယ်ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ပြောရရင် အလှပြင်တာ မကြိုက် ခေတ်ပေါ် အဝတ်အစားဝတ်တာမကြိုက် ကျောင်းစာ ပညာရေးသာ ဖိလုပ်စေချင်တဲ့ မိဘအောက်က ဆင်းသက်လာတဲ့ ကျွန်မကအနုပညာကို အရမ်းဝါသနာပါတာ.. ရူးသွပ်လွန်းလို့ မိဘကိုယ်တိုင်လိုက်ရော ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးတိုက်ထောင်ပြီး သမီးလေးကို ဗီဒီယိုကားတွေ ထုတ်ရိုက်ပေးလိုက်တာ ကိုယ်လည်း လမ်းစပေါ်လေးရောက်မယ်ကြံရော ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကြီး ပျက်ပါလေရော (တစ်ခါနော်)…..။
ဟု တ် ပြီ ထားတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး အဖေက အလုပ်မလုပ်ဘဲ ထိုင်နေတာမကြိုက်တော့ Traval & Tours Company ထောင်ထားတာ ကို သမီး ဆက် လု ပ်လိုက် ဆိုပြီး လွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှ ဒီကကျွန်မကလည်း အပီအပြင်လုပ်ပြီဟေ့ဆိုပြီး ခရီးစဉ်တွေ သေချာစဉ်းစား ပထမ ဦးဆုံး လုပ်မယ့် ကိုယ့်ခရီးစဉ်ကို လင်မယားနှစ်ယောက် ဓါတ်ပုံဆရာငှါးပြီး သွားရိုက်မယ် blog ပါရိုက်ပြီး တင်မယ်… ဆိုပြီး Company page ကို ကိုယ့်အ ကောင့်မှာ share လိုက်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး…. ငဗစ်က ဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ စီးပွါးရေးပါ ထိုးဆင်း ဒုက္ခတွေ ရောက် ကုန်ကြ ရော (တစ်ခါ) မှတ်ထားနော် ၂ ခါရှိပြီ….။
ကဲ ခု တစ် ခါ ပထမ ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အိမ်မှာ ထိုင်နေရတာ အင်မတန် ပျင်းစရာကောင်းလွန်းလို့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ အားမနေရ အောင်လုပ်မယ်ဟာဆိုပြီး Live sale စလုပ်လိုက်တာ အံမယ် live sale လွှင့်တာ လက်တစ်ဖက်ရေစာတောင် မရှိဘူး ခု ကိုကို Zuckerberg က live sale တွေ ရဲ့ viewer တွေကို ဘာလုပ်ချလိုက်ပြန်ပလဲ မသိပါဘူးကွယ် viewers တွေ ထိုးကျသွားလိုက်တာ အံ့တောင် ဩယူ ရတယ်ကြားတာတော့ အရင်လို ရောင်းချင်တိုင်းရောင်းမရတော့ဘူးဆိုလား ( တစ်ခါ) ကဲ ၃ ခါဆိုတော့ ဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့ ဘူးနောက်ဆုံးမှာ ဒို့စဉ်းစားလိုက်မိတယ် ဒို့ကို ကံကြမ္မာကြီးက အသာလေးထိုင်နေပါဟယ် ညီးဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပါနဲ့လို့များ ကျိန်စာတိုက် ထားလေသလားကွယ် ကျွန်မရဲ့ လက်တွေ့ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲရှင် ပုံပြင်က အရမ်း ဟက်ထိတယ်ကွာ မျက်ရည် တစ်စက်ကျသွား တယ် …. ဆိုပြီးရေးသားလာပါတယ်။ ပိုးအိအိခန့်ကတော့ သူကြုံတွေနေရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ဟာသနှောပြီး ပြောပြလာခဲ့ပါတယ် နော် ။ အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေး တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး လည်း သာယာပျော်ရွှင် တဲ့ နေ့တစ်နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေ နော် ။
ပရိသတျ ကွီးရေ ….. အမြားအားကြ ခဈြခငျရတဲ့ မိသားစု မြား ထဲမှာ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ပိုးအိအိခနျ့ နဲ့ နိုငျငံကြျော ဘောလုံးသမားအောငျသူ တို့ မိသားစု လေးက လညျး အပါ အဝငျ ပဲဖွဈ ပါ တယျ ။ သူတို့ နှဈဦး ဟာ ယခုဆို ရငျ ပါး‌ဖောငျးဖောငျးလေး နဲ့ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ သားငယျလေး သဲကိုး ကို လညျး ပိုငျဆိုငျ နပွေီဖွဈပါတယျ။ သဲကိုးလေးဟာလညျး အခုဆိုရငျ တဈနှဈကြျောသှားပွီဖွဈပွီး အရမျးကိုခဈြစရာေ ကာငျးလာတာပါနျော ပိုးအိဟာ မကွာသေးမီကသူမရဲ့ Facebookစာမကျြနှာမှာ မငျးသမီးစလုပျတဲ့အခြိနျကစပွီး ယခုလကျရှိ အိမျထောငျ ကပြွီးတဲ့အထိ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အရာလေးတှကေို တငျပေးလာပါတယျ။
အာ့တာ ကတော့… တှေးမိပွီး ကိုယျ့ဘာကိုယျ ရယျမိလို့ဟာသအနနေဲ့ ပွောပွရဦးမယျ ကြှနျမဘဝကို ကံကွမ်မာကွီးက ဘာအလုပျမှ မလုပျဘဲ အေးအေး လူလူထိုငျနပေါ လို့မြား သတျမှတျထားလသေလားမှတျရတယျပထမဦးဆုံး အနနေဲ့ပွောရရငျ အလှပွငျတာ မကွိုကျ ခတျေပျေါ အဝတျအစားဝတျတာမကွိုကျ ကြောငျးစာ ပညာရေးသာ ဖိလုပျစခေငျြတဲ့ မိဘအောကျက ဆငျးသကျလာတဲ့ ကြှနျမကအနုပညာကို အရမျးဝါသနာပါတာ.. ရူးသှပျလှနျးလို့ မိဘကိုယျတိုငျလိုကျရော ပွီး ထုတျလုပျရေးတိုကျထောငျပွီး သမီးလေးကို ဗီဒီယိုကားတှေ ထုတျရိုကျပေးလိုကျတာ ကိုယျလညျး လမျးစပျေါလေးရောကျမယျကွံရော ဗီဒီယိုဈေးကှကျကွီး ပကျြပါလရေော (တဈခါနျော)…..။
ဟု တျ ပွီ ထားတော့ အိမျထောငျကပြွီး အဖကေ အလုပျမလုပျဘဲ ထိုငျနတောမကွိုကျတော့ Traval & Tours Company ထောငျထားတာ ကို သမီး ဆကျ လု ပျလိုကျ ဆိုပွီး လှဲပေးလိုကျတဲ့အခါမှ ဒီကကြှနျမကလညျး အပီအပွငျလုပျပွီဟဆေို့ပွီး ခရီးစဉျတှေ သခြောစဉျးစား ပထမ ဦးဆုံး လုပျမယျ့ ကိုယျ့ခရီးစဉျကို လငျမယားနှဈယောကျ ဓါတျပုံဆရာငှါးပွီး သှားရိုကျမယျ blog ပါရိုကျပွီး တငျမယျ… ဆိုပွီး Company page ကို ကိုယျ့အ ကောငျ့မှာ share လိုကျပွီး သိပျမကွာပါဘူး…. ငဗဈက ဖွဈပွီး တဈကမ်ဘာလုံးရဲ့ စီးပှါးရေးပါ ထိုးဆငျး ဒုက်ခတှေ ရောကျ ကုနျကွ ရော (တဈခါ) မှတျထားနျော ၂ ခါရှိပွီ….။
ကဲ ခု တဈ ခါ ပထမ ကိုဗဈဖွဈတော့အိမျမှာ ထိုငျနရေတာ အငျမတနျ ပငျြးစရာကောငျးလှနျးလို့အလုပျတဈခုမဟုတျ တဈခုတော့ အားမနရေ အောငျလုပျမယျဟာဆိုပွီး Live sale စလုပျလိုကျတာ အံမယျ live sale လှငျ့တာ လကျတဈဖကျရစောတောငျ မရှိဘူး ခု ကိုကို Zuckerberg က live sale တှေ ရဲ့ viewer တှကေို ဘာလုပျခလြိုကျပွနျပလဲ မသိပါဘူးကှယျ viewers တှေ ထိုးကသြှားလိုကျတာ အံ့တောငျ ဩယူ ရတယျကွားတာတော့ အရငျလို ရောငျးခငျြတိုငျးရောငျးမရတော့ဘူးဆိုလား ( တဈခါ) ကဲ ၃ ခါဆိုတော့ ဒါတိုကျဆိုငျမှုမဟုတျတော့ ဘူးနောကျဆုံးမှာ ဒို့စဉျးစားလိုကျမိတယျ ဒို့ကို ကံကွမ်မာကွီးက အသာလေးထိုငျနပေါဟယျ ညီးဘာအလုပျမှ မလုပျပါနဲ့လို့မြား ကြိနျစာတိုကျ ထားလသေလားကှယျ ကြှနျမရဲ့ လကျတှပေုံ့ပွငျလေးကတော့ ဒါပါပဲရှငျ ပုံပွငျက အရမျး ဟကျထိတယျကှာ မကျြရညျ တဈစကျကသြှား တယျ …. ဆိုပွီးရေးသားလာပါတယျ။ ပိုးအိအိခနျ့ကတော့ သူကွုံတှနေရေတဲ့ အဖွဈတှကေို ဟာသနှောပွီး ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ နျော ။ အဆုံးထိ ဖတျရှုပေး တဲ့ ပရိတျသတျကွီး လညျး သာယာပြျောရှငျ တဲ့ နတေ့ဈနေ့ ကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါစေ နျော ။
Previous post ဆီးချိုရော ဂါ နဲ့ နှလုံးေ ရာဂါ အခံ တွေ ရှိနေ တဲ့ ဝါရင့် သရုပ် ဆောင်ကြီး ဦးမိုးဒီ တစ်ယောက် ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကူးစက် ခံရ
Next post ပုရိသ တွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီး နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ နဲ့ DJ SODA